Kukwidza Masitepisi - Zvese Zvaunonyatsoda Kuziva | Bezzia
Susana godoy | 05/05/2021 16:00 | Musha
Iwo mahandrails emasitepisi ndeimwe yeanonyanyo kufarirwa ekushongedza ruzivo. Kunyangwe zvichizogara zvichitsamira pamhando yemanera atinawo mupfungwa, ichokwadi kuti mamodheru anogonawo kusiyana nawo. Mazuva ano, ane masitayera ane hushoma kwazvo, anowanzo kupihwa asi kana uchiafarira, gara nesu.
Nhasi tinoongorora iyo mhando dzakasiyana dziripo, dzezvinhu zvavo uye nezvimwe zvakawanda Chii chatinofanira kufunga nezvacho. Kunyangwe zvingave zvisingaite senge, imba yako inogona kutora yakakura yekushongedza twist neumwe wavo. Hautendi here? Ipapo iwe unongo fanirwa kuiwana uye sarudza iyo inonyatsoenderana nekushongedza kwako.
1 Ndedzipi mhando dzema handrails
2 Zvinodhura zvakadii kuisa handrail yemasitepisi
3 Maitiro atinoyera handrail
Ndedzipi mhando dzema handrails
Zviri pachena kuti isu tinoziva zvavari asi kana tikamira kuti tifunge, zvirokwazvo iwe unozoona kuti vanogona kuve vakasiyana kwazvo uye nekudaro, hapana chakafanana nekuita ongororo yezvose zvakajairika.
Handrail yematanda masitepisi: Iyo ndeimwe yeakanyanya kusarudzika, kunyange hazvo zvishoma nezvishoma yakagadziridzwa. Ichokwadi ndechekuti ine ruzivo rwakavezwa muhuni, izvo zvinoita kuti vave protagonists makuru maererano nekushongedza. Mese munogona kuvawana vane shava uye chena kuti vaigadzirise kune echinyakare kana echinyakare masitayera.
Aluminium handrail: Nemhepo yakanyanya kuwanda, aluminium ichave imwe yeanobatsirana pamwe nekusimba kwazvo. Zvichava zvakakwana kune zvishongedzo zvakapusa uye nzvimbo dzakashama kwazvo.
Handrails dzakasungirirwa kumadziro: Vanoratidzika kunge vakazvimiririra pamatanho ese, nekuti akanyatsoiswa mukati memadziro. Asi ivo vanovewo ekutanga uye anobatsira. Pano izvo zvigadzirwa zvinogona kuve zvakasiyana kwazvo, asi akanakisa uye esimbi magumo anowanzoonekwa.
Vertical handrail: Ivo ndeimwe yeavo avant-garde sarudzo. Izvi zvinoreva kuti vanoenda nematanho kana nhanho dzakasununguka uye kuti vanosanganiswa nerudzi rwemaketeni ane mabara matete. Kushongedza uye kuita zvakasiyana-siyana zvinouya pamwechete!
PVC handrail: Icho chinhu chisingadhuri chinokodzera zvese zvemukati uye zvekunze. Kuve unoumbika, iwe unogona kugara uchizviisa pakuda.
Zvinodhura zvakadii kuisa handrail yemasitepisi
Ichokwadi kuti kana tichitaura nezvemitengo zvinogara zvichinetsa kupa chaiyo nhamba. Saka ikozvino tinogona kukuudza kuti kana iwe uchihaya yekuisa sevhisi, Inogona kukubhadharira kubva ku80 euros kusvika kune anopfuura mazana maviri, nguva dzose zvichienderana nehurefu hwesimbi, izvo zvinhu zvakasarudzwa uye, hongu, basa.
Imwe yesarudzo dzakakurumbira ndeyesimbi, aluminium kana simbi yekupedzisa handrails.. Ehe simbi inopedzisa yakachipa, kunze kwekugadzira izvo zvekuti mutengo waizokwira zvakanyanya. Kune rimwe divi, kunyange hazvo matanda ematanda ari pakati peanonyanya kuoneka, haasi iwo nguva dzose anodhura. Ivo vanogara vachitsamira pakuvezwa kwavanotakura uye maumbirwo avo.
Maitiro atinoyera handrail
Ichokwadi kuti kune zvinhu zviri nani kusiiwa kune nyanzvi. Asi Kana iwe uri murume anobatsira uye uchida kusvetukira mukati, zvirokwazvo iwe zvakare uchazoda kuziva maitiro ekuyera ruoko rwemaoko. Ichokwadi kuti havazi vese vakaenzana, nekuti sezvataona, maumbirwo avo kana magumo achasiyana Asi sekutonga kwese, unofanirwa kutanga wayera padanho rekutanga uye muchikamu chayo chinobuda kusvika chekupedzisira, zvakare muchikamu ichocho chatinobuda chatichatsika. Ndokunge, kubva kune yakanyanyisa kuenda kune imwe. Ipo kukwirira kwacho kuchiwanzo kuiswa pamasentimita makumi masere, angangoita. Asi ichokwadi kuti zvinoenderana nemhando yekutuka kwazviri. Iwe unogona kugara uchiwedzera mashoma mashoma masendimita kuhurefu, kuti uite yekushongedza mhedzisiro kana irwo kuravira kwako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Kukwidza Masitepisi: Zvese zvaunoda Kuti Uzive!